संविधानको रक्तरन्जित पृष्ठभूमि
सिद्धान्तहीन राजनीति रथका दुई पांग्रा हुन् – धर्म र अपराध । .... सिद्धान्त र मूल्य पद्धतिमा आधारित लोकतान्त्रिक लीकबाट राजनीति बाहिर ओर्लेर लीक छोडेको रेलजस्तै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ ।
नेताहरुलाई व्यक्तिगत स्वार्थले गाँजेको छ ।
....... प्राचीन हिन्दू समाजका लागि राजनीति धर्म थियो । अहिले यो सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनेको छ । अपराध यसको मुख्य हतियार बनेको छ । ..... अधिकारकर्मीहरु ‘लजिस्टिक सपोर्ट’ को खोजीमा दाताहरुको ढोका ढकढक्याउँदै होलान् । ..... घटनापछि गृहमन्त्रीले संसदमा हलुका जानकारी दिए, आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन दक्षिणतिरबाट घूसपैठ भएको थियो । उत्तरी घूसपैठलाई हिमालले रोक्ने हुँदा नेपाली भूमिमा दक्षिणबाट मात्र घूसपैठ हुने गरेको छ । ..... गृहमन्त्रीले आन्तरिक घूसपैठका सम्भावनालाई ठाडै इन्कार गरे । यो थियो गृहमन्त्रीको पक्का राजनीति । भोलि कतै ती घुसपैठियासँगै मिलेर सत्ताको रोटी पकाउनु पर्ने हो कि ? तिनीहरुकै सहयोगमा आन्दोलन चर्काउनु पर्ने पो हो कि ? के थाह । ...... काठमाडौंमा रहेको सत्ताको केन्द्र जतिजति संविधान निर्माणको कार्य अन्तिम विन्दूमा पुगेको सन्देश प्रचारित गर्छ उति उति देशको अवस्था दुरुह बन्दै गएको छ । ...... मधेश तराईका सहरहरु बन्द छन् । बाटाघाटा अवरुद्ध छन् । संविधानलाई कारण बनाएर जनता आफ्ना असन्तुष्टिहरु एकमुष्ठ व्यक्त गर्दैछन् । यी सबै घटनाहरुबाट बेखबर प्रधानमन्त्री भन्दछन्, संविधानले हामीलाई नौ वर्ष अल्ममल्यायो । अब हामी अलमलिनु हुँदैन । संविधान बनाएर विकासमा जुट्नु पर्दछ । ...... जसरी भूईंचालोको भविष्य कसैले बताउन सक्दैन त्यसरी नै संविधानको भविष्य पनि अनिश्चित देखिन्छ । .... देशको राजनीति चपल छ ।
अनियन्त्रित बन्दै पूर्वी तराई
मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी
लगायत जिल्लामा सयभन्दा बढी सवारी तोडफोड र आगजनी भएका छन् । .... शान्तिपूर्णलाई सरकारले आन्दोलन नै नठान्ने गरेको
वार्ताको माहोल बनाउ: तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर
सेना परिचालनसम्बन्धी रिट खारेज
चाँडो संविधान जार्न सभासदको माग
एक वर्ष भित्र मोटरबाटोले डोल्पाको सिमाना छुने
चितवनमा थारुको प्रदर्शन
चितवनका थारु समुदायले नयाँ संविधानमा चितवनलाई प्रादेशिक राज्य घोषणा लगायतका माग गर्दै शनिवार भरतपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ..... विरोध प्रदर्शनका लागि ठुलो समुहमा थारु महिला, बृद्धबद्धा तथा युवाहरु गांउगांउबाट भरतपुर उपमहानगरपालिकामा ओईरिएका थिए । ...... थरुहट आन्दोलन जिन्दाबाद, चितवनलाई प्रादेशिक राज्य घोषणा गर, राज्यको सबै अंगमा पुर्ण समानुपातिक, समावेशी लागु गर, थारुहरुको माग पुरा गर ..... जुलुसमा ५ हजार भन्दा बढीको सहभागिता थियो । पुर्व मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्मको तराईमा ३ प्रदेश कायम गरिनु पर्ने लगायतका ७ सुत्रिय माग राखी थारु कल्याण कारिणी सभाले आयोजना गरेको ४ दिने आम हडतालको पुर्व सन्ध्यामा भरतपुरमा निकालिएको विशाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको हो ।
जनजाति आधारित पार्टीहरु एकीकरण गर्न विदेश बाट दबाब
तपाईं आदिवासी जनजाति नेताहरू भिन्नभिन्न दल खोलेर राजनीतिक मैदानमा आइरहँदा उत्पीडनमा पारिएका लाखौं नेपाली जनताहरू अलमल्ल परेका छन्, बाँडिएका छन् र हाम्रा मुद्दाहरू तपाईंहरूकै कारणले ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । तपाईंहरूले एउटा मात्रै राजनीतिक दल निर्माण गरेर वर्गीय र जातीय उत्पीडनमा पारिएका लाखौं नेपाली जनताहरूलाई एकीकृत बनाई तिनीहरुको आशाको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने एउटा बृहत् राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न केले रोकेको छ ?
म होइन । शुशील, प्रचण्ड, माधव पो हुन त डन
मेरो नाम गणेश लामा हो । मेरो जन्म थलो काभ्रे तर कर्मथलो काठमाडौं हो । हाल म फोरम (लोकतान्त्रिक) को केन्द्रीय सदस्य पनि छु र म आफुलाई ब्यबसायी भन्न पनि रुचाउँछु । ...... शुरुमा अध्ययन गरें, पढाई पछि एउटा उमेरमा आएर मैंले ब्यापार पनि गरें । त्यो भन्दा अगाडी मेरो झै झगडा पनि भएको थियो । मैले त्यहि अनुसारको सजायाँ पनि पाएँ । त्यसपछि मैले लगातार व्यापार गरें र हाल म सक्रिय राजनीतिमा लागि रहेको छु । म फोरम लोकतान्त्रिकको जिम्मेवार पोष्टमा छु । म माथी लागेका जुन आक्षेपहरु छन् यसका बारेमा मैैंले बिभिन्न मिडियाका साथीहरुलाई भन्दै आएको छु, तैपनि मैैंले अझै मुक्ति पाएको छैन । यो डन भनेको के हो मैले अझै बुभ्mन सकेको छैन । .......... मलाई कसैले पिटे होला, मलाई पिट्न आएकाहरुको बिरुद्ध म उठें होला अनि मैले पनि पिटें होला । ..... मैैंले कसैको आँसु झार्ने काम, कसैको दुई रुपिया लुट्ने काम, कसैको छोरी चेली बिगार्ने काम अथवा राष्ट्रमा आँच आउने काम गरिन । ..... यो राज्य शत्तामा जसको हालिमुहाली चल्छ त्यहि हो डन । म अहिलेको अवस्थामा सुशील कोईरालालाई डन भन्छु । किनकी उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको सवै चिज चल्छ । उहाँलाई चाहिँ डन टाईटल दिन सुहाउँछ । यो भन्दा पहिला प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो भन्दा पहिला माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो होला । सवैकुरा गर्ने क्षमता उहाँहरुको हातमा हुन्छ । तव मात्र त्यसलाई डन भनिन्छ होला । म त आफुलाई एक आम साधारण नेपाली भन्न चाहान्छु । ....... युवाहरुलाई बिभिन्न दलले चुनावमा बुथ लुट्न, ढुंगा हान्न, मास जुटाउन प्रयोग र प्रोत्साहन गर्ने अनि आफु पदमा पुगिसकेपछि ती युवाहरुलाइ आफुले सकेको रोजगारी दिनुको सट्टा, राम्रो बाटो देखाउनुको सट्टा उल्टै गलत आरोप लगाउने जस्ता प्रबृत्ति पनि त बढेको छ नि । ..... मैले लोकसेवामा नाम निकाल्न सकिन होला प्रहरीमा सकिन होला तर
मैंले रेष्टुरेन्टदेखि लिएर अन्य सेक्टरमा आफुले सकेको ठाउँमा मैले तीन हजार पैतिससयदभल्दा बढी युवाहरुलाइ रोजगारीको अवसर दिइरहेको छु ।
...... झापाको कुनै एउटा कुनामा कसैले तँलाई गणेश लामा ल्याएर पिटाउँछु भन्यो भने मैले कसरी थाहा पाउने ? त्यसैगरी कैलाली, कञ्चनपुरमा मेरो नाम लिएर कसैले कसैलाई धम्क्याउने , थर्काउने गर्छ भने मैले कसरी जान्ने ? यी थर्किन बाध्य बनाउनेहरु पनि त मिडिया नैं हो नि त । म त्यो चिज होईन बाबा भनेर मैले पटक पटक तपाईहरुसंग भनिरहेको छु । यदि म त्यो चिज भएको हो भने त मैैंले झापा फोन गरेपनि थर्किने भो, कैलाली फोन गरेपनि थर्किने भो । म त्यो चिजलाई नैं स्वीकार्न तयार छैन, म त्यस्तो होइन बाबा, आम साधारण नेपाली नागरिक हुँ, साधारण भएर बाँच्न चाहन्छु ....... अहिले टुरिज्म फिल्डमा छु । मैले हिजोको दिनमा रेष्टुरेण्ट ब्यबसाय पनि गरें होला, मैंले क्रसर आदिको काम पनि गरें होला । .... मैंले आफ्ना बालबच्चा पाल्नको लागि ब्यापार गरेको छु भने राजनीतिलाई चाहिं सेवाको रुपले लिएर अगाडी बढिरहेको छु । ..... तपाई राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ, तपाईसँग, क्षमता छ, भिजन छ र तपाईसँग राम्रो टिम छ भने देशमा बिभिन्न बैंक,बित्तिय संस्थाहरु छन तिनले ऋण दिहाल्छन नि । अहिलेपनि मेरो धेरै ऋण छ । अहिले पनि मलाई ऋणको तनाव हुन्छ । महिना महिनामा बैंकको लोन तिर्नुपर्छ । राम्रो भिजन भयो, राम्रो टिम भयो भने काम गर्नलाई त त्यत्ति गाहे नैं छैन । .... यो देशमा २,४ जनालाई रोजगारी दिएर राज्यले बनाएको नीतिमा छिरेर ट्याक्स तिरेर करोडपति बनेको हो । ...... म एउटा साधारण मान्छे । म जाहाँ खान्थेँ, जहाँ बस्थेँ त्यहि बसेको छु । म राजनीतिमा सक्रिय छु । जसरी अहिले मधेसका बिभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलन चलिरहेको छ दिनहुँ जस्तो पार्टीमा अहिले वैठक भैरहेको छ । अवको रणनीति कसरी बनाउने, आदिवासी, मधेसी, जनजाती, पिछडीएको बर्गको आवाजलाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले हाम्रा केन्द्रिय अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार दिनानूदिन चार दलको बैठकमा सम्वाद गरिरहनु भएको छ भने हामी केन्द्रीय लेभलका नेताहरु पनि पार्टी कार्यालयमा बसेर पार्टी कार्यक्रमहरुलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर काम गरिरहेका छौँ । म पनि त्यहि अनुसार काम गरिरहेको छु । ....... मैले बिगत १०,१२ वर्षदेखि काभ्रे लगायतका जिल्लाका पढ्ने ईच्छा भएका गरिव भाईबहिनीहरुलाई सहयोग गरेको छु । मैले काभ्रेलाई त कोटा नैं छ्ट्याएको छु । मैले हरेक बर्ष त्यहाँबाट ३ जनालई बिभिन्न कलेजमा स्कलरसिपको व्यबस्था गरेको छु । कुनै ठाउँमा स्वाश्थ्य शिबिर लगेर, कहिँ खेलकुदको माध्यमबाट, कुनै ठाउमा बिकास निर्माणको काम गरेर सहयोग गर्दे आएको छु । कहिँ १०, २० बोरा सिमेन्ट दिएर मैले निरन्तर रुपमा समाज सेवाको काम गर्दे आएको छु । मैंले यो काम मानव भएकाले आत्मसन्तुष्टिका लागि गरेको हुँ । न कि प्रचारको लागि । ....... दैनिक बिहान १,२ घण्टा एक्सरराईज गर्छु त्यहि नैं रमाईलो छ । त्यसपछि राजनीति, व्यापार, समाजसेवा आदिका फोन आउन थाल्छन् बिजि भईन्छ । ...... म हिन्दू, बौद्ध दुवै धर्म मान्छु । ..... आज भन्दा ४,५ बर्ष पहिले त राष्ट्रिय मिडियाहरुमा यो डन हो भनेर फोटोसहित समाचार आउँथे । अहिले मेरो छोरो ८ मा पढ्छ । एउटी छोरी छिन् । त्यतिबेला मेरो छोराले बाबा तपाईको फोटो आएछ भनि पत्रिका देखायो । मलाई कस्तो भयो होला भन्नुस त ? कसैले पनि आफ्नो मानिस चोर गुन्डा फटाहा भएको मन पराउदैन । .. हिजो कसैले कच्चा उमेरमा गरेको गल्तिलाई लिएर आज पनि तनाव दिईरहनु हुदैन । ...... मान्छेले मलाई जे ठानेर भेट्न आउने गर्छन् उनीहरुले मलाई भेटिसकेपछि आकाश जमिनको फरक पाउने गर्छन् । म कसैसंग खस्रो बोल्दिन, नम्र भएर सम्मानपूर्वक बोलि व्यबहार गर्ने मेरो बानि छ ।
federalism janajati madhesi Nepal tamang tharu